X2Go: nyore kure madhesiki pane yako GNU / Linux distro | Linux Vakapindwa muropa
Izvo zviri kuwedzera kuve zvakajairika kushandisa kure kure desktops, kungave kupa kana kugamuchira tekinoroji rubatsiro, kana kune zve teleworking nyaya Iva zvazvingaite, pane zvakawanda zvinotsiva zvinoita kuti hupenyu hwako huve nyore paLinux kuti ugone kushanda pamwe neaya ari kure desktops. Imwe yacho ndeye X2Go software, yakavhurwa sosi chirongwa chinoshandisa iyo NX Technology protocol.
X2Go inopa kure kure kuwana iyo graphical mushandisi interface kana kure desktop. Iyo inogona zvakare kushandiswa kuwana kure kure desktops yeMicrosoft Windows anoshanda masystem, uye kwete chete yeGNU / Linux. Zvekuwedzera kuchengetedzeka, zvakare inopa yakachengeteka kure zvikamu kuburikidza neSSH.
Sezvazvinowanzoitika mune iyi mhando ye software, pane server package uye mutengi package. Iyo sevha inofanirwa kuiswa pane inomiririra Linux muchina. Inowanzoenderana nematafura mazhinji, kunyangwe mamwe angangoda mamwe marongero kuti ave nechokwadi chekuenderana.
Kana ari mutengi package, ichaiswa pane mumwe muchina. Iyi imwe software inowanikwa kune ese Linux distros, pamwe ne macOS neWindows. Kamwe sevha uye mutengi zvave kuiswa pamakomputa, kubatana kwacho kunogona kusimbiswa uye desktop iri kure inogona kutariswa nekuitwa senge yaive yemuno kubva kune imwe komputa ...
Iyi software ndeye mahara, pasi GPLv2 + rezinesi, uye mahara. Uyezve, X2Go yakanyorwa mumutauro wePerl chirongwa. Iwe uchaiwana yakarongedzwa kune akawanda distros, senge Ubuntu, Debian, Fedora, SUSE, RHEL, nezvimwe. Iyo zvakare ine yekuwedzera-kuwedzeredza kugona kwayo uye GUI yakanyorwa muPython inowanikwa kune mutengi anonzi PyHoca-GUI.
Iyo mutengi package inowanikwa muDMG fomati ye macOS, .exe yeWindows. Uye pane webhusaiti iwe unowana inonakidza wiki neruzivo kana uine chero matambudziko nekumisikidza, kunyange zviri nyore kwazvo ...
Mamwe ruzivo nezve X2Go - Ona webhusaiti
Wona kodhi yekuchengetedza - Repository
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » X2Go: nyore nyore madhesiki pane yako GNU / Linux distro